eNasha.com - रोशन र ममिताको रौनकपूर्ण बिहे
लामो समय प्रेममा भएपछि के गरिन्छ ? शायद विवाह नै ! यो संसारमा विवाहको अन्य विकल्प छैनन् । त्यसैले त ६ वर्ष लामो प्रेम प्रसङ्गलाई वैवाहिक जीवनमा बाँध्ने निर्णय हंगकंगको मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गरिरहेका रोशन लिम्बु र ममिता गुरुङले गरेका छन् ।
सन् १९९८ मा नेपालको चर्चित सौन्दर्य प्रतियोगिता मिस नेपालमा भाग लिन नपाएकोमा दुःखी हुँदै हंगकंग पुगेकी ममिता गुरुङले सन् २००० मा त्यहीँ आयोजन भएको मिस हंगकंग नेपालमा भाग मात्र लिइनन्, मिस हंगकंग नेपालको ताजसमेत पहिरिन पाइन् । २००१ मा उनले मिस्टर हंगकंग नेपाल १९९८ मा टाइटल जितिसकेका रोशन लिम्बुसँग उनको चिनजान भएको थियो ।
त्यही चिनजान गहिरो मित्रता र मित्रतापछि प्रेमीप्रेमिकाका रुपमा एकअर्कालाई स्वीकार गरिसकेका ममिता र रोशनले ६ वर्षको गम्भीर प्रेमलाई वैवाहिक समारोह जुराउन सन् २००३ मा बिहेको कुरा छिनेका थिए । त्यसयता दुवै सँगै बस्दै आएका उनीहरुले बिहे गर्न चाहिँ दशैँ-तिहारको रमाइलो मौसम चुने । गएको असोज ३० गते उनीहरुको वैवाहिक संस्कार धरानमा सम्पन्न भयो ।
दुवैको अन्तरजातीय विवाह हालै धरानमा सम्पन्न गरेर उनीहरु हंगकंग फर्किसकेका छन् । सानो पारिवारिक समारोहका बीचमा दुवैको विवाह सम्पन्न भएको पारिवारिक श्रोतले जनाएको छ । विवाहपछि उनीहरुले पोखरामा छोटो हनिमुन मनाएका छन् । हंगकंगबाट टेलिफोनमा ममिताले ठट्टा गर्दै इनशाडटकमसँग भनिन्- "लामो हनिमुन चाहिँ हंगकंगमै मनाउँदैछौँ । हा...हा...हा... ।"
रोशन र ममिता दुवै हंगकंगमा रहेको मनोरञ्जन उद्योगलाई सबल बनाउन कम्मर कसेर लागेका छन् । ममिताले इनशाडटकमसँगको लामो कुराकानीमा एक पटक भनेकी थिइन्- "मिस हंगकंग नेपाललाई मिस नेपालसँग सहकार्य गराउन पाए, हाम्रो उद्देश्य पूरा हुने थियो ।"
सेलेब्रिटी माओवादी संविधानसभा हल्ला मोबाईल awards पेट्रोल crisis streets अनुभव समलिङगी hi-life celebrity events festival